Family Farm Adventure အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
1.5.103 for Android
4.5 | 10,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် XAPK（383.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Family Farm Adventure
မိသားစုလယ်ယာစွန့်စားမှုဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီးသင်သီးနှံအမျိုးမျိုးကိုရိတ်သိမ်းနိုင်သည့်ကောင်းမွန်သောလယ်ယာလုပ်ငန်း simulator ဂိမ်းကိုလေ့လာပြီးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောကျွန်းများကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်ကြွယ်ဝသောလယ်ယာမြို့တိုင်ကိုစတင်ပါ။ Felicia နှင့် Toby ကိုသူတို့၏စွန့်စားခန်းများ၌သူတို့စွန့်စားခန်းများနှင့် ပူးပေါင်း. ပျော်စရာပဟေ les ိများကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီပေးပါ။
📖ပုံပြင်။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှု, အံ့အားသင့်ခြင်း, ပဟေ les ိများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်ပုံပြင်ကို ဆက်. လယ်ယာမြေအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်ကြိုးစားပါ။
🔍 Explorations ။ သင်၏မြို့မှထွက်ခွာ။ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဓာတ်ပုံဆရာ Felicia နှင့်တောက်ပသောရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များနှင့်အတူလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအပူပိုင်းဒေသကျွန်းများကိုစူးစမ်းလေ့လာပါ။ ဘဏ္ tre ာကိုလယ်ယာမြေသို့ပြန်ပို့ပါ။
🎈အလှဆင်ခြင်း။ သင့်ရဲ့ပန်းပွင့်လယ်ယာအလှဆင်! ပန်းများပွဲတော်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအိမ်များ, အလှဆင်မှုများနှင့်ဗဟိုချက်များပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း။ ဒီပွဲတော်အတွက်ပြင်ဆင်မှုများအားလုံးကိုပြီးအောင်လုပ်ပြီးလယ်ပြင်၌လူတိုင်းနှင့်အတူကျင်းပပါ။
🚜လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်လယ်ယာကိုအပူပိုင်းဒေသကျွန်းတွင်စတင်ပါ။ သီးနှံရိတ်သိမ်းခြင်း, လယ်ယာမြေများကိုမွေးမြူ။ သင်၏ချက်ပြုတ်စွမ်းရည်နှင့်အတူအစားအစာများထုတ်လုပ်ပါ။ သင်၏လယ်ယာကိုဤ Simulator တွင်ချက်ပြုတ်ထားသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပါ0င်ပါ။
adaventures ။ ဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောကျွန်းများမှတဆင့်သင်၏ခရီးသွားခြင်းအပေါ်စိန်ခေါ်မှုများကိုဖြည့်စွက်ပါ။ သင်၏လယ်ယာမြေပေါ်တွင်တိရိစ္ဆာန်များကိုစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်သင်၏စွန့်စားခန်းများမှအနားယူပါ။
🕵️🐯လူများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များ။ ဖော်ရွေပြီးထူးခြားတဲ့ရွာသားတွေ, သင်၏လယ်ယာသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်နှင့်အတူတကွချက်ပြုတ်ရန်သူတို့ကိုပြောပါ။
🏴☠️ဘဏ္ asures ာတိုက်။ Creative Prozzles များကိုဖြေရှင်းခြင်းဖြင့်ဝှက်ထားသောဘဏ္ tre ာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။ သင်၏လယ်ယာမြေအပေါ်သင့်ကိုကူညီမည့်အပိုဆုကြေးအမျိုးမျိုးအတွက်သူတို့ကိုကုန်သွယ်။ ပဟေ les ိအချို့ကသင့်မြို့ကိုအလှဆင်ရန်မမျှော်လင့်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။
သင်၏လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးစွမ်းရည်ကိုပြသပါ, သီးနှံရိတ်သိမ်းခြင်းများကိုရိတ်သိမ်းခြင်း, မြေသြဇာကောင်းသောမြေဆီလွှာသည်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာကိုပြုလုပ်သည်။ သင်၏စွန့်စားခန်းများမှရှားပါးသောအလှဆင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်သင်၏လယ်ယာဘဝကိုချဲ့ထွင်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏သာမန်လယ်ယာလုပ်ငန်းဂိမ်းမဟုတ်ပါ, ၎င်းသည်လယ်ယာသက်သက်မျှတသူဖြစ်သည်။
မိသားစုမွေးမြူရေးစွန့်စားမှုသည်အခမဲ့ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အချို့သောဂိမ်းပစ္စည်းများကိုငွေဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဂိမ်းတွင်တိုးတက်မှုများကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်သော်လည်းအကြောင်းအရာမည်သည့်အကြောင်းအရာတွင်မဆိုပါ0င်ရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
မိသားစုမွေးမြူရေးစွန့်စားမှုကိုနှစ်သက်ပါသလား။ ဂိမ်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook Fan စာမျက်နှာ - https://www.facebook.com/familyfarmadiMAmventure
Family Farm Adventure Android Gameplay Walkthrough Part 1
Family Farm Adventure Energy tips | How to get more energy
Family Fram Adventure | Unlimited Coins , Gems , Max Level ,Energy , Resources
LMD Cheat Games
Mobile Ads - Family Farm Adventure
Family Farm Adventure Hack ✅ How to Get Unlimited Gems & Coin in Family Farm Adventure
Dark Shadows Beginnings
Family Farm Adventure 1.5.102
Family Farm Adventure 1.5.101
Family Farm Adventure 1.4.345